सुत्नेसमयमा भोली चैत्र १९ गते राशिअनुसारको भाग्यफल - Muldhar Post
सुत्नेसमयमा भोली चैत्र १९ गते राशिअनुसारको भाग्यफल
दैनिक राशिफल २०७७, १८ चैत्र बुधबार 545 पटक हेरिएको
भोली मिति २०७७ साल चैत्र महिनाको १९ गते । मेष-राम्रो स्वास्थ्यको कारण तपाईं खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनुहुनेछ। आफ्नो ठूलो पार्टी सबैलाई लिनुहोस् – आज तपाईंसँग आफ्नो समूहको लागि कार्यक्रम संगठित गर्ने ऊर्जाको अतिरिक्त मात्रा हुनेछ। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। आफ्नो ठाउँमा भएको कुनै बच्चा वा कुनै पनि बुजुर्ग नागरिकको नराम्रो स्वास्थ्यले तपाईंलाई चिन्तित बनाउन सक्छ जसले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा सीधा असर पार्नेछ।
वृष-तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा मित्रहरूले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नेछन्। आज केही प्राकृतिक सौन्दर्यद्वारा तपाईं चकाचौंद हुने सम्भावना छ। तपाईंका साझेदारहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार काम गरेनन् भने आहत हुनु आवश्यक छैन – तपाईंले तिनीहरूसँग त्यस विषयमा राम्रोसँग कुरा गर्नु आवश्यक छ। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
मिथुन-आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। दिन संगठित तरीकाले संचालन गर्नुहोस् – आफुलाई मद्दत माग्नको लागि विश्वास गर्न सक्ने मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस्। आफ्नो प्रेमी जीवनमा तीतो तुच्छ कुराहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। सहकर्मी र वरिष्ठहरूले पूर्ण सहयोग दिएकोले कार्यालयमा काम छिट्टो हुनेछ। तपाईंको जीवनसाथी कहिल्यै आजभन्दा रमाइलो थिएनन्।
कर्कट-आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। तपाईंका परिवारका सदस्यहरूले सानो कुरालाई ठूलो बनाउने प्रयास गर्ने सम्भावना छ। वासनाको तीरबाट उम्कने मौका कम छ। तपाईंले अतिरिक्त ज्ञान र सीप प्राप्त गर्न केही अतिरिक्त समय र ऊर्जा प्रयोग गर्नाले अत्यन्तै लाभ हुनेछ। आज तपाईं आफ्नो जोडीसित आफ्नो किशोर अवस्थाको सम्झना गर्नुहुनेछ, र फेरि सबै निर्दोष मजाको आनन्द लिनुहुनेछ।
शिंह-अत्यधिक प्रभावशाली मान्छेको सहायताले तपाईंको नैतिकतामा ठूलो बढावा दिन्छ। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको परमानन्द प्रेम भएका दुई बीच रहन्छ। हो, तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ। आज काममा तपाईंको सफलताको दिन हुनेछ! विवाह पछि पाप उपासना हुन्छ, र तपाईंले आज धेरै उपासना गर्न सक्नु हुनेछ।
कन्या-तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। आफ्ना छोराछोरीको समस्या समाधान गर्न केही समय बाहिर जानुहोस्। तपाईंका प्रेमीको अत्यधिक माँग गर्ने व्यवहारले आज रोमान्स कम नै हुने सम्भावना देखिन्छ। वरिष्ठ सहकर्मी र आफन्तहरूले राम्रो सहयोग गर्नेछन्। विवाह भनेको एकै छानो मुनि बस्नु मात्र होइन। आफ्नो साथीसँग केहि समय बिताउनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
तुला-तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। तपाईंका प्रियजनहरूसँग तपाईंको सम्बन्ध बिग्रिने मुद्दालाई बढ्न नदिन सक्ने सबै भन्दा सही मान्छे तपाईं हुनुहुन्छ। काम बाँकी भए तापनि रोमान्स र सामाजिकताले तपाईंको मनलाई शासन गर्नेछन्। व्यापार साझेदारले सहायतापूर्ण व्यवहार गर्नेछन् र तपाईंले सँगै रहल काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
वृश्चिक -केही मनोरञ्जनको लागि आफ्नो कार्यालयबाट छिट्टै बाहिर निस्किने प्रयास गर्नुहोस्। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। घरेलु जीवन शान्तिपूर्ण र प्यारो हुनेछ। तपाईंको सधैंभरिको प्रेम आफ्नो प्रियको लागि एउटा नदी हो। तपाईंको लगातार मेहनतलाई आज साँच्चै नै राम्रो लाभ भएको छ। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
धनु-तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। आफन्तको घरमा जानु तपाईंले कल्पना गरेभन्दा पनि धेरै राम्रो हुनेछ। नयाँ परियोजनाहरू र योजना लागू गर्न राम्रो दिन। आज तपाईंले गरेको स्वयंसेवक कार्यले तपाईंले सहयोग गर्नहरूलाई मात्र नभएर तर तपाईंले थप आफैलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न पनि मद्दत गर्नेछ। धेरै दिनपछि तपाईं र तपाईंको जोडी फेरि एकअर्काको प्रेममा पर्नु हुनेछ।
मकर-राम्रो स्वास्थ्यको लागि लामो पैदल यात्राको लागि बाहिर जानुहोस्। तपाईंलाई व्यापार क्रेडिटको दृष्टिकोणले भेट गर्न आउनेहरूको वास्ता नगर्नुहोस्। आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोस् किनकि यसले तपाईंका हजुरबा हजुरआमाको भावनामा चोट लाग्न सक्छ। फतफताएर आफ्नो समय बर्बाद गर्नुभन्दा मौन बस्नु राम्रो हो। हामी समझदार गतिविधिहरुको माध्यमबाट जीवनको अर्थ दिन्छौं भनेर बुझ्नुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान राख्नुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। आज तपाईंलाई प्रेम सबैको विकल्प हो भन्ने महसुस हुनेछ। कामका कुराहरू तपाईंको पक्षमा हुने देखिन्छन्। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। आजभोली तपाईं र तपाईंको जोडी धेरै खुसी हुनु हुँदैन भने, तपाईं आज पागल रमाइलो गर्न जानु हुँदैछ।
कुंभ-केही मानसिक दबाब भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। बच्चाहरुलाई अध्ययनमा राम्ररी चासो नराख्नाले स्कूलमा केही निराशा उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईंको आफ्नो प्रिय / जोडीले गरेको फोनले तपाईंको दिन शुभ हुनेछ। काम गर्ने आफ्नो वरिष्ठ आज स्वर्गदूतहरूको अभिनय गरेको जस्तो देखिन्छ। आजको दिन “पागल हुने” दिन हो! तपाईं आफ्नो जोडीसित प्रेम र रोमान्सको टुप्पामा पुग्नु हुनेछ।
मीन-एउटा मित्रको ज्योतिष निर्देशनले तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। तपाईं आज उपस्थित भएको समारोहमा नयाँ मित्रता विकास हुनेछ। एउटा आश्चर्यको सन्देशले तपाईंलाई राम्रो सपना दिनेछ। नयाँ उद्यम सुरु गर्नको लागि शुभ दिन। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई स्वर्ग पृथ्वीमा नै छ भन्ने महसुस गराउने छन्।